सम्पादकीय Archives - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधी यति शक्तिशाली ?
काठमाडौं, २६ भदौ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा संलग्न अपराधी निकै शक्तिशाली र पहुँचवाला रहेको स्पष्ट भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिकै सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसीले निरीह जस्तै बनेर “निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारालाई कारवाही गर्न...
सम्पादकीय : मुलुकी संहितामा पोखिएको लोकतान्त्रिक दलहरुका अलोकतान्त्रिक चरित्र
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले ८औं दलको आरोप समेत खेप्यो । जगजाहेर भएको तथ्य हो कि खडेरीका बेला सात दलको आन्दोलनमा ७ जना मान्छेको उपस्थिति हुने दिन पनि देख्नुपर्यो । शाही शासन वा ज्ञानेन्द्र शासनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता...
सडकमा नाङ्गै उभिएर कांग्रेसको नाटक
२०७५ असार २१ बिहीवार
नेपाली कांग्रेस आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ । आन्दोलनको मुडमा आएर मात्रै पनि भएन । त्यसका लागि गतिलो मुद्दा हुनुपर्यो, जुन मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा जान सकियोस्, सरकारका कामकारवाहीमा बाधा हाल्न सकियोस् र आमजनताका बीचमा आफू लोकप्रिय बन्न सकियोस् । नेपाली कांग्रेस...
प्रधानमन्त्रीज्यू, गफ त निकै धेरै भयो, अब काम पनि गर्ने कि ?
२०७५ असार २० बुधवार
रातमा सुतेको बेला होइन, दिउँसै सपना देखाए एमाले र माओवादी केन्द्रले । मुलुकको समृद्धिको सपना देखाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका यी दुई दलले वाम गठनबन्धन निर्माण गरेर चुनावपछि एकता गर्ने उद्घोष गरे । र, मुलुकमा दुई तिहाईको स्थिर र शक्तिशाली सरकार...
खोटाङ, ३ वैशाख । दिक्तेलस्थित एक पसलबाट बिक्री गरिएको चिनीमा युरिया मल मिसिएको भेटिएपछि प्रशासनले कारबाही शुरु गरेको छ । ग्राहकले खरिद गरेको चिनीको प्याकेटमा युरिया मिसिएको भेटिएपछि पाण्डे भेराइटिजको जानकी जनरल अर्डर एण्ड सप्लायर्सका सञ्चालक मुकेश्वर पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासन...